मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन,यी ४ राशिलाई लाभै-लाभ ! - kageshworikhabar.com
मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन,यी ४ राशिलाई लाभै-लाभ !
मंगल ग्रहले बुधबार बिहान राशि परिवर्तन गरेको छ।
बुधबार बिहान ७ बजेर ४ मिनेटमा मंगल ग्रहले राशि परिवर्तन गरेको हो। मंगलको राशि परिवर्तनले सम्पूर्ण राशिमा प्रभाव पार्नेछ।
मंगलका कारण अब निम्न केहि राशिहरुलाई लाभै-लाभ हुनेछ।
Previous article२४ घण्टामा प्रदेश १ मा कोरोनाबाट २२ जनाको मृत्यु
Next articleखोपको दुबै मात्रा लगाएकाहरू भन्छन्, ‘बाच्ने आशा जाग्यो’